Kaliya Mobilada AluFrame Kiiska Maqaarka ee loogu talagalay iPhone 6 | Wararka IPhone
Dib u eegista kiiska AluFrame Leather ee iPhone 6 oo laga helo Just Mobile
louis padilla | | Qalabka IPhone, iPhone 6
Dhammaan dadka isticmaala iPhone-ku waxay isku raacsan yihiin inay ceeb tahay in dabool la dhigo si loo ilaaliyo taleefannadeenna casriga ah oo aan noo oggolaanayn inaan ku raaxaysano taabashadiisa iyo qaabkeeda. Laakiin ficil ahaan dhammaanteen waxaan ku dhamaaneynaa ilaalinta terminaalkeena. Kala doorashada naqshadeynta iyo ilaalinta ayaa waxoogaa dhib ah, laakiin marka laga hadlayo kiiska aan maanta ku tusinno Just Mobile maahan wax dhibaato ah, maadaama maqaarka AluFrame ee iPhone 6 wuxuu isu keenayaa wax kasta oo aan u baahanahay si aan u ilaalino taleefankeena casriga ah iyadoo aan laga bixin naqshad qurux badan, xitaa xitaa taabashada aluminium ee gacmaheena.
Waxaa lagu heli karaa midabbo kala duwan (buluug, madow, casaan, beige iyo cawl), AluFrame Leather for iPhone 6 waa kiis laba qaybood ah oo si fiican isugu daraya barkinta kiiskeeda TPU-da ee gudaha leh iska caabinta aluminium-ka jir, kuna dar taabashada fasalka leh dhabarka maqaarka dhabta ah ee midabka aad dooratay.
Marka lagu daro hubinta ilaalinta aaladdaada mahaddeeda labada qaybood, Just Mobile ayaa ka dhigtay rakibida kiiska mid aad u fudud. Ha iloobin qalabka wax lagu xiro ee kiisaska kale ee aluminium u baahan yihiin in la dhigo maxaa yeelay rakibidda maqaarka AluFrame ma sahlanaan karin ama ka fududeyn karaan. Waxaad marka hore dhigaysaa iPhone 6 kiiskaaga TPU ee ku habboon sida galoofyada, ka dibna ku dheji aluminium. Waxay ku dhacdaa si sahlan oo ay umuuqato in jirku dhici karo wakhti kasta, laakiin dhowr maalmood oo la isticmaalo kadib waxaan kuu xaqiijin karaa inaysan taasi dhici doonin.
Dhibaatada kale ee kiisaskaani badanaa leeyihiin waa inaysan u oggolaanaynin helitaanka caadiga ah ee dhagaha ama hillaaca isku xirayaasha, laakiin sida aad ku arki karto sawirrada, aluminiumku aad buu u khafiifsan yahay, furitaankiisuna waa ballaaran Uma baahnid nooc ka mid ah adabtarada si aad ugu dhejiso taleefankaaga dhegaha ah ee aad kahesho iPhone-kaaga.
Helitaanka qalabka gariirku sidoo kale waa ballaadhan yahay si aad ugu raaxeysan karto si raaxo leh, iyo badhanka kor iyo hoos, iyo sidoo kale badhanka awoodda, Waxay sidoo kale ku dhammeeyeen aluminium iyo garaacistoodu waa sax oo raaxo leh.
Dhinaca dambe, marka lagu daro dhabarka maqaarka ee dhabarka ee siinaya taabasho qurux badan oo aan si dhib yar uga sameyn karno astaanta Just Mobile ee dhinaca midigta hoose, waxaan ka heli doonnaa aperture loogu talagalay kamaradda oo ku dhaji shaashad madow taasi waxay iska ilaalin doontaa inaad dhibaato kala kulanto sawirrada la shidan.
Faa'iidada kale ee kiiska kuwa kale ee la midka ah ayaa ah in geeska aluminiumku uu ka soocan yahay xagga hore ee iPhone-ka, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si cabsi la’aan ah u dhigto shaashad kasta oo shaashadda ilaalisa maadaama aysan jirin wax khatar ah oo ah in kor loo qaado sababo laxiriira awgood. Sida aad ku arkeyso sawirka, kala soocitaanku wuu muuqdaa laakiin ma jiraan wax nusqaan ah maadaama boosku uu buuxiyo TPU jilicsan ee daboolka gudaha.
Waxaan haddaba la kulannaa kiis “qiimo sare” ah oo loogu talagalay naqshadeynta, dhammeynta iyo agabka, laakiin aan ilaawin inaad ilaaliso boosteejadaada, oo qiimaheedu sidaas ka sarreeyo kan kiisaska kale ee caadiga ah laakiin aan buunbuunin haba yaraatee. Waxay kuxirantahay midabka aad dooratid waxaad kaheli kartaa Amazon oo ah € 35 waxaa si toos ah u iibiya Just Mobile iyo waliba haddii aad tahay macmiil caymis leh oo kharashka dhoofinta lagu daro.
€35 a €39
Naqshad taxaddar leh
Qalabka tayada leh
Ilaalin ku filan
Ma jiro iPhone 6 Plus
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Dib u eegista kiiska AluFrame Leather ee iPhone 6 oo laga helo Just Mobile
Apple Watch iyo vs. Gear S2, isbarbardhiga fiidiyowga